Daa'ima bool'a bishaanii bu'e baasuutti lubbuun namoota afurii darbe - BBC News Afaan Oromoo
Daa'ima bool'a bishaanii bu'e baasuutti lubbuun namoota afurii darbe
Image copyright Murtii Mohaammmed
Godina Harargee Lixaa magaal Baddeessatti da'iima bool'a bishaanii bu'e baasuuf namootni afur walduraa duubaan galanii baasuuf tattaaffii taasisaniin lubbuu dhaban.
Hojjetaan Komisnikeeshinii magaala Badeessaa obbo Ramadaan Haruun ''jalqaba irratti daa'ima ganna 13'tti tilmaamutu salaatuuf jecha bishaanii keessaa bishaan baasuuf jedhe achuman keesatti kufee'' jedhu.
Mucaan eessuma isaa biroon obboleessa isaa kan waliin tures gaaf baasuuf yaalu innillee keessa bu'ee achumaan hafee nuun jedhan.
Bu'aan qorannoo lafee kan Nadhiiti jedhame maal agarsiise?
''Namni sadaffaan abbaa maatii fi daa'ima qabu naannoo san tures seenee baasuuf yaalus innillee achumaan hafe.''
Namni arfaffaan abbaa maatii ta'es akkasuma jarreen boolla bishaanii lixan kana baasuuf yaalee innillee boolla sana lixee hafee nuun jedhan.
Dhumarrattis namni Shanaffaan maatii of jalaa qabuufi naannoo Oromiyaa biroo irraa gara sana dhaqe jedhamu ''haada hidhate lixee nama Afraffaarratti lixe baasee fiixeedhaan erga gahee booda haadni ittii citee innillee lubbuu dhabe.''
Taateen kun araddaa ganda duwwaa tokko buufata konkolaataa fuullee bishaanii nama dhuunfaa hojii qulqullina konkolaataaf jecha dhiyee qotame akka ta'es nutti himan.
Taateen gaddisiisaan kun guyyaa Roobii naannoo sa'aa jahaatti mudate. Reeffa namoota shanan bool'a biirii tokkotti dhuman kanaa basuuf sa'aa jahaa ol kan fudhate ta'uufi konkolaataan ijaarsa daandiif oolu Ekiskaavaatarri hojiirra ooleera.
Namoota lubbuu dhaban keessaa afur maatii akka ta'an hojjetaan kominikeeshinii magaalichaa nutti himaniiru.
Magaal Baddeessaa keessa hanqina bishaanii jiru irraa kan ka'e, namootni dhuunfaan biirii qotatanii itti fayyadaman tilmaamaan 20 gadi hin ta'anis nuun jedhan.
Taate kaleessaa kanaan jiraattootni magaalitti naasuu fi gadda keessa kan jiran yoo ta'u, awwalchi namoota du'anii har'a akka raawwatamu dhageenyeerra.
Haacaaluu Hundeessaa: 'Oromoon kadhatee jiraachuufi bulchuu hin qabaatu'